मुकेश अंबानीकी बुहारी श्लोकाले लगाउने हिल जुत्ताको मूल्य सुन्दा परिन्छ चकित
पाेखरा ३१ साउन- बलिउडमा मुकेश अंबानीकी बुहारी श्लोका मेहताको हिलको निकै चर्चा चलिरहेको छ । भारतको सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अंबानीले छोरी ईशा अंबानीको विवाहमा गुलीटा’ नामको बंगाला उपहार दिएका थिए ।उक्त बंगालाको केहि समय अघि निकै चर्चा चलिरहेको थियो ।
पाटिमानै उनको पहिरनको भन्दा उनले लगाएको हिलको निकै चर्चा चल्यो । श्लोका मेहतले सोफिया वेबस्टरको आइकानिक हिल लगाएकी थिइन् । उनले लगाएको हिलको मूल्य ५० हजार भारतीय रुपैया परेको छ ।
श्लोका मेहता पार्टी तथा समारोहमा पहिरनका कारण चर्चामा आउने उनी यतिबेला हिलका कारण चर्चामा आएकी छिन् । एक पार्टीमा नीता अम्बानीसँगै उनका छोरा र बुहारी समेत पुगेका थिए । मुम्बईमा भएको उक्त रिटायर्ड पार्टीमा नीता कालो पहिरनमा थिइन् भने बुहारी श्लोका निलो आकाशे रङको मेटेलिक स्कर्ट र सेतो रङको अफ शोल्डर टिसर्टमा थिइन् ।
मिशन मंगल’ बन्यो अक्षयको करियरकै बम्पर ओपनिङ्ग गर्ने फिल्म, एक दिनमा कमायो यति करोढ
अक्षय कुमार अभिनित फिल्म ‘मिशन मंगल’ले पहिलो दिन अर्थात बिहिबार ३० करोडको व्यापार गर्न सफल भएको छ। यो फिल्म उनको
करियरकै बम्पर ओपनिङ्ग गर्ने चलचित्र रहेको छ । ‘मिशन मंगल’ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा प्रदर्शनमा ल्याईएको हो ।
यस चलचित्रमा चर्चित कलाकार अक्षय कुमार बिद्या वालन , तापसी पन्नु , सोनाक्षी सिन्हाको मुख्य अभिनय रहेको छ । त फिल्म ‘मिशन मंगललाई दर्शकहरुले अत्याधिक रुचाएका छन् । पहिलो दिनमा ३० करोडको व्यापार गर्न सफल भएको यो चलचित्र अबको दिनमा कति कमाउला त्यो हेर्ने बाकि नै रहेको छ ।
८४ वर्षमाथिकालाई यसरी घरमै हुन्छ उपचार…
तिर्सना बुढाथोकीः मलाई पुरुषको औलाले से*क्स गरिदेको मन पर्छ (भिडियाे)
काठमाण्डौमा पैसाकालागि क*ण्डम बिनै यौ*न सम्पर्क
हसाएर ठहरै पार्ने धुर्मुसको बब्बाल कमेडी (भिडियो)
अन्तरजातीय बिबाह गरेको प्रेमजोडी, मृ*त्यु कुरिरहेका बिक्रमको साहारा बनिन मनु (भिडियाे)
पो*र्न स्टार मिया खलिफाः स्त*न ठुलो भएकै कारण केटाहरुले मलाई तिरस्कार गरे (फाेटाे फिचर)
‘छ माया छपक्कै’ को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ प्रिमियरमा लामो समयमा देखिइन् नायिका शिल्पा (भिडियो)
प्रहरी हबल्दारबाट नै बालिकामाथि बला*त्कार प्रयास
युवती रुँदैरुँदै तान्दै थिईन तर युवक दौडेर नारायणी नदीमा हाम्फा*ले
प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च कति ?
काठमाडौं उडेका ४ वटा हेलिकप्टर एकैपटक धानखेतमा आकस्मिक अवतरण
योगेश-ज्ञानेन्द्र प्रकरणमा गगनको ‘इन्ट्री’ : दिए कडा प्रतिक्रिया
८२ लाख रुपैयाँ बुझाएर कतारको जेलमा रहेका बिनोद रानाभाट नेपाल आइपुगे (भिडियो
मोरङमा १ पटकमा ३ सन्तानको जन्म !
ज्ञानेन्द्र शाही थुनामुक्त, प्रहरी भन्छ– सुध्रिने मौका दियौं